Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || गन्थन : अक्सिजन, बोतलको २५ रुपैयाँ ! – kayakairan.com
गन्थन : अक्सिजन, बोतलको २५ रुपैयाँ !
प्रिय पाठक, बडो विचित्र लाग्छ मलाई बजारको व्यवहार । विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर म बजारमा बस्दै आइरहेको छु र नजिकबाट नियालिरहेको छु बजारको नियत । आजको गन्थनमा प्रस्तुत छ बजारको व्यवहारबारे मेरो बुझाइ र विश्लेषण ।
लायन्सचोकबाट सुरु हुन्छ नारायणगढ बजार । नारायणी पुलको मुखैमा गएर टुंगिन्छ । यो बजारको लम्बाइ लगभग एक किलोमिटर जति होला । चौडाइ पनि चानचुन त्यति नै हुनुपर्छ । कूल एक वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो बजारको शक्ति भने अजस्र छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार चितवन जिल्लाको जनसंख्या ५७९,९८४ छ । त्यसपछि कयौं मान्छे बसाइँसराइ गरी यहाँ आए होलान् । जन्मिए होलान् । थपिए होलान् । १ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो बजारले २२३८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब ६ लाख जनसंख्यालाई संरक्षण दिएको छ । मजस्ता कतिपय बाहिरियालाई पनि यसले शरण दिएको छ । प्रिय पाठक, मलाई लाग्छ तपाईंलाई बजारको शक्तिसँग परिचित गराउन यो तथ्य काफी छ ।
भरतपुरको ओरालो झर्दै जब तपाईं लायन्सचोकमा पुग्नुहुन्छ । तपाईंले देख्नुहुन्छ लायन्सचोकको बीचमै सवारीसाधनको व्यवस्थाका लागि एउटा ट्राफिक पोस्ट राखिएको छ । त्यो ट्राफिक पोस्ट र मेरो अजीबोगरीब साइनो छ । त्यो पोस्टको माथिल्लो भित्तामा ठूला अक्षरमा लेखिएको छ–‘बचत गरौँ ।’ त्यो एउटा कमर्सियल बैंकको विज्ञापन हो । तर, अनौठो कुरो के छ भने म त्यो विज्ञापन बजारबाट फर्किदा मात्रै देख्छु, जाँदा देख्दिन । अब प्रश्न उठ्छ, ‘म त्यो विज्ञापन जाँदा किन देख्दिन ? फर्किदा मात्रै किन देख्छु ?’ म निष्कर्ष निकाल्छु, किनभने बजार जाँदा मसँग पैसा हुन्छ, गरम गोजीको उन्मादमा म त्यो विज्ञापन देख्दिन । बजारबाट फर्किदा जब मेरो गोजी सिथिल भइसकेको हुन्छ, म त्यो विज्ञापन पढेर तर्सिन्छु ।
बजारको विकास मान्छेले पैसाको आविष्कार नहुँदै गरे । किनभने पैसा नहुँदै पनि मान्छेका सीमित आवश्यकताहरु थिए । ती आवश्यकता पूरा गर्न मान्छेले पालोपैंचो र सट्टाबदली गर्ने गथ्र्यो । अहिले पनि बजारले नछोइसकेका गाउँघरतिर त्यो चलन कायमै छ ।
इतिहासकारका अनुसार मान्छेले पैसाको अवधारणा ल्याएको चालिस हजार वर्षभन्दा बढी भएको छैन । तथापि पैसाको आविष्कार ठ्याक्कै कसले ग¥यो भन्नेमा अझै पनि इतिहासकार स्पष्ट छैनन् । तर, ‘लिडियन’हरुले चाँदी र सुनको समीश्रणद्वारा जब सिक्का बनाए तबदेखि नै बजारको औपचारिक सुरुआत भएको मान्न सकिन्छ । मान्छेले अब सेवा र सामग्रीलाई सिक्कामा साँट्न थाले । प्राकृतिक विकासक्रमको सिद्धान्तलाई नै अंगालेर मुद्रा सिक्काबाट नोटमा परिणत भएको हुनुपर्छ । सिक्काको सुरुआतसँगै बजार बढ्यो । बजारसँगै बढ्यो सिक्काको खपत । बहुमूल्य धातुले बनेका सिक्काहरु बोक्न भारी भइरहेको अवस्थामा चिनियाहरुले कागजी नोट बनाए । विश्वभरि नै जब मुद्राको विकसित स्वरुपमा नोटको प्रचलन सुरु भयो, बजारको आकार विकराल बन्दै गयो । जुन आजपर्यन्त जारी छ ।
पुँजीवादका पिता भनेर चिनिने अर्थशास्त्री एडम स्मिथ आफ्नो किताब ‘द थ्योरी अफ सेन्टिमेन्ट्स’ (जसमा अर्थाबजारका नैतिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक पूर्वाधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ) मा लेख्छन्, “स्वतन्त्र बजार एउटा अदृश्य हातको नियन्त्रणमा हुन्छ ।” उनको सबैभन्दा चर्चित किताब ‘द वेल्थ अफ् नेसन्स’ मा पनि त्यो अदृश्य शक्तिको चर्चा गरिएको छ । उनि तर्क गर्छन्, “बजारको माग, आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा, मुनाफा इत्यादि प्रवृत्तिलाई कुनै अदृश्य हातले विनिमयित गरिरहेको हुन्छ ।”
मलाई लाग्छ हामी सबै बजारलाई नियन्त्रण गर्ने त्यही अदृश्य हातद्वारा शासित छौं । यो त्यही हात हो, जसले पैसा भएका बखत लायन्सचोकको ट्राफिक पोस्टमा राखिएको विज्ञापनलाई हेर्न दिदैन । र, जब म बजारबाट रित्तिएर घरतिर फर्किरहेको हुन्छु, त्यही अदृश्य हातले मेरा आँखा ‘बचत गरौ’ मा लगेर गाडिदिन्छ ।
निसन्देह मानिस बजारमुखी भएको छ । जन्मेदेखि मरुञ्जेलसम्म बजारिया भएर बाँच्न विवश छ मान्छे । बिहान उठेदेखि सुतेसम्म बजारकै भूमरीमा फस्न विवश छ ऊ । उसको किचनदेखि टोइलेट, ओछ्यानदेखि रछ्यान सबै बजारले ओगटेको छ । कोही पनि बजारबाट अछुत छैन । रहन सकिने अवस्थै छैन । मान्छेको सम्पूर्ण शक्ति नै बजारबाट कसरी मुनाफा लिने भन्नेमा खर्च भइरहेको छ । योभन्दा बढी उसको चाहना छैन । बजारबाट जसले जति बढी फाइदा लिन सक्यो, ऊ उति नै बढी सफल !
समग्रमा, मान्छेको सारा जीवन नै बजारमुखी भएको छ । तर, स्वीकार्नैपर्ने एउटा तीतो यथार्थ के हो भने मानव सभ्यताको सुरुआतताका मान्छेले बजारलाई चलाउँथ्यो । तर, कालान्तरमा एडम स्मिथले भनेझैँ बजारले मान्छेलाई चलाइरहेको छ । मान्छेलाई अर्बपति बनाउने पनि बजार नै हो, मगन्ते बनाउने पनि। मान्छेलाई डाक्टर बनाउने पनि बजार नै हो, पोर्नस्टार बनाउने पनि। धनी बनाउने पनि बजार नै हो, गरीब बनाउने पनि । मैले के हेर्ने, के सुन्नेदेखि लिएर के खाने, के लाउनेसम्म बजारले तय गर्छ । म स्वतन्त्र छु भने त्यो स्वतन्त्रता पनि बजारले दिएको हो, जसलाई बजारले आफ्नो मुनाफाका लागि प्रयोग गर्नेछ । तर, वास्तवमा म एक कैदी हुँ । कसको ? बजारको !
बजारले नै संसार चलाइराखेको समय हो यो । चारैतिर बजारको कब्जा जारी छ । प्रकृतिदेखि परमात्मासम्म । प्रकृतिमा त अझ बजार कहर बनेर बर्सिरहेको छ । विषालु नारायणी, वरिपरिका नाङ्गा डाँडाकाँडा, पातलिदै गएका जंगल, बढ्दै गइरहेको ग्लोबल वार्मिङ आदि सबै यसैका उदाहरण हुन्। । हिजोसम्म पानि निःशुल्क पिउनुहुन्थ्यो मेरो बुवाबाजे । पानीको पनि पैसा तिर्नुपर्नेछ भनेर मेरा पुर्खाले सायदै सोचेका हुँदा हुन् । तर, आज हेर्नुहोस् बजारले मलाई पानी बेचिरहेको छ । आज म निःशुल्क स्वास फेरिरहेको छु । अक्सिजनका लागि मैले बजारलाई पैसा तिर्न परिराखेको छैन ।
तर, जुन रफ्तारमा बजारको आकार बढिरहेको छ, त्यही गतिलाई आधार मान्ने हो भने भोलि मेरो सन्ततिले अक्सिजन किनेर स्वास फेर्नुपर्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । अहिले यो बजारले जसरी मलाई पानी बेचिरहेको छ, भोलि त्यसरी नै मेरा सन्ततिलाई यसले भन्नेछ ‘बिल्कुल ताजा अक्सिजन, बोतलको मात्र २५ रुपैया !